Harry Kane oo Rikoodh Taariikhi sameeyay kulanki Juventus ee Champions League
Thursday, January 24th, 2019 - 10:00:39
Wednesday February 14, 2018 - 08:48:48 in Wararka by Hussein Hadafow
WeerarayahankaTottenham Harry Kane ayaa ka sare maray ciyaaryahanada Didier Drogba iyo Ronaldinho kadib markii uu dhaliyey goolkiisii 9-aad muddo 9 kulan oo uu saftay koobka horyaalada Yurub.
Xiddiga Tottenham ayaagoolahye ianluigi Buffon dib mariyey gool isagoo shabaqa oo maran dhaliyay, kulanki xalay labda koox ku dhex maray garoonak Alienzaee magaalda Turin , waxaana goolkalabaad ee barbarara Tottenham u saxiixai Christian Eriksen oo daqiiqaddii 72-aad dhaliyey wuxuuna kulanku ku dhammaaday 2-2.
Kane goolkiisa ayaa sidoo kale barbarreeyay dalka England rikoodh uga yiilay koobka horyaalada yurub ,wuxuuna la sinmay kabtankii hore ee Liverpool Steven Gerrard oo 7 gool dhaliyay xal xilli ciyaareed.
Balse goolkaas ayaa sidoo kale Spurs xiddiggeeda uga mid ahaa tariikhaha ugu wanaagsan ee Champions League.
Didier Drogba, Ronaldinho, Simone Inzaghi iyo Diego Costa ayaa dhammaantood dhaliyay min 8 gool ciyaaraha 9-ka ah ee ugu horreeya Champions League, ka hor kulankii xalay ayuuna dhaliyay isagu, wuxuuna ahaa rikoodh aad ugu wanaagsan isagoo fursad u hasyta inuu Rikoodhyo kale jabiyo.
Laacibkan oo 24-jir ah ayaa sidoo kale ku jira xiddigaha ugu goolasha badan 5-ta horyaal ee Yurub wuxuuna dhaliyay 33 gool dhammaan tartamada.